Semalt: Fomba 5 hampiasana fitaovana famafazana tranokala
Diniho ny habetsan'ny angon-draketrana hita ao amin'ny Internet: ahitana lahatsoratra, horonan-tsary, sary, memes, sary ary infografika. Ny fitomboana dia mametraka ny habetsahan'ny tranokalam-pifandraisana efa ho iray tapitrisa, miaraka amin'ireo antitra efa nanjavona ary ny fanampiana ireo vaovao. Isaky ny faharoa, ny tweets mihoatra ny 7548 dia nalefa, ary sary 772 mihoatra ny Instagram no navoaka. Amin'ny ankapobeny dia avo roa heny noho ny habeny ny World Wide Web nanomboka tamin'ny taona 2012, izay midika fa betsaka ny angona azo avy amin'ny. Mampalahelo fa tsy afaka manampy antsika hanatratra ny angon-drakitra ny tolotra fanoroana tranokala nentim-paharazana , ka tsy maintsy manaraka ireto fomba ireto isika mba hampiasana ny fandraketana tranonkala amin'ny fomba tsara kokoa.
1. Fikarohana momba ny varotra sy fitarihana:
Ny varotra sy ny marika rehetra dia mahafantatra fa ny fikarohana ara-barotra dia manan-danja amin'ny fahombiazana. Raha te-hanomboka, hanitatra na hanova ny orinasa ao amin'ny orinasanao an-tserasera ianao, dia tsy maintsy hikaroka aloha ianao hoe inona no zavatra tsara indrindra sy ilaina indrindra ary ny karazana votoaty tokony ho entina hanatsarana azy. Tahaka izany ihany koa, ny fitarihana dia mety hiteraka rehefa nanoratra tranokala iray na roa ianao. Hanampy anao hampitombo ny varotra ataonao izany rehefa omena anao ny angon-drakitra mahasoa sy voalanjalanja sy ny antsipirian'ny mpanjifanao vaovao sy misy anao.
2. Fifandraisana sy mpanaraka ao anatiny:
Amin'ity izao tontolo izao manerantany amin'ny fanatontoloana sy ny dizitaly, ny lazan'ny marika iray dia maro, ary ny teknolojia maro sy ny paikady maro samihafa dia novolavola amin'io lafiny io. Fantaro ny karazana data ilainao sy ny fomba hihazonana ny lazanao an-tserasera. Ohatra, rehefa mandamina tetikady ORM ianao, dia hanampy anao hahatakatra ny fanehoan-kevitr'ireo mpanjifanao ny angon-drakitra voasoritra. ny endriky ny votoatiny sy ny paikadiny ara-barotra, ary amin'ny farany dia hanokatra ny varavaran'ny teknolojia ho an'ny haingo ho anao ary hanorina ny fototry ny marika.
3. Fomba fitadiavana fikarohana (SEO):
Ny làlam-pandrefesana amin'ny tranokala dia azo alaina mora foana amin'ny alàlan'ny tranonkala, toy ny ahafahanao manombana ny trafika mivantana na organika loharanom-bokona, loharanom-pamoahana, tambajotra sosialy, programa fandikan-dalàna, ary mailaka. Tsara ny manatsara ny fahombiazan'ny tranonkalanao amin'ny sehatra SEO ary hanampy amin'ny fampihenana ny taham-pitenenana amin'ny ankapobeny. Rehefa nosakananao ny tranonkalanao, ny tahiry dia azo alamina sy hajanona mora, ka hanatsara ny fikarohana amin'ny tranokalanao.
4. Fanitarana an-tsokosoko sy fananganana:
Raha mitady asa vaovao ianao, dia afaka manandramana olona an-jatony an'arivony. Amin'ny fampiasana programa fanarabiana, azonao atao ny mahazo ny angon-drakitra amin'ny sehatra lehibe, forums, biletà dizitaly ary lisitry ny lisitra. Toy izany koa, afaka mandefa loharano an-tserasera maro ianao hameno toerana eo amin'ny orinasa. Ny angon-drakitra fanampiny dia hanampy anao hahita ny kandidà tena izy, indrindra fa ireo mpianatry ny oniversite sy oniversite izay mety ho lasa ny volanao rahampitso.
5. Mitady mba hivarotana:
Amin'ny maha mpandraharaha ara-barotra azy, afaka mamangy mora foana ny angona avy amin'ny tanàna, tanàna, ary sary ianao mba hamoronana lisitra matanjaka . Azonao atao ihany koa ny manaparitaka ny dokam-barotra sy ny trano fividianana tranokala sy ny dokam-barotra, mifandray amin'ny mpividy sy ny mpividy izay manolotra anao ny tolotra tsara indrindra Source .